/blog/gallery/2019 Otu esi eme ka testosterone enanthate homebrew na nzọụkwụ 6
Ihe na 05 / 07 / 2019 by Dr. Patrick Young dere na gallery.
Ihe niile banyere testosterone enanthate ntụ ntụ
1. Kedu ihe bụ testosterone enanthate
2. Kedu ihe Testosterone enanthate mere n'ahụ gị
3. Otu esi eme Testosterone Enanthate homebrew nzọụkwụ site nzọụkwụ
4. Testosterone Enanthate homebrew nzọụkwụ site nzọụkwụ
5. Malite gị steroids homebrew si Testosterone
Isiokwu a na-enye nkọwa zuru ezu banyere otu ị ga - esi mee testosterone enanthate homebrew. Ọ na-amụtakwara na uru Testosterone Enanthate.
Kedu ihe bụ testosterone enanthate
N'ịbụ ndị na-eme ka ndị mmadụ na-ewu ewu, ndị mmadụ na-ele anya maka ihe nwere ike inyere ha aka inweta uru karịa ndị ọzọ. Ihe atụ nke mgbakwunye dị otú ahụ bụ testosterone enanthate nke bụ otu n'ime steroid testosterone kachasị mee ihe. Ọ bụ marogen and Anabolic steroids.
Ọ bụ ezie na a machibidoro ya iwu iji mee ihe, ọ na-anọgide na-abụ otu n'ime ihe ndị kachasị chọọ steroid site n'aka bodybuilders. Ọ bụghị nanị na ọ bara uru n'ahụ ndị na-ahụ ozu ma ọ bara uru nye ndị na-eji ya na-agwọ ọrịa ọgwụ na-agbanwe agbanwe, maka ndị na-eme ka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-emegharị ihe na maka ọgwụgwọ hypogonadism.
Kedu ihe Testosterone enanthate mere n'ahụ gị
Testosterone Enanthate egosila na ọ ga-enyere aka na mmezi anụ ahụ nke na-amịpụta na mgbake ahụ dị ngwa. Site n'ịbawanye mmepụta nke protein, ọ na - enyere anụ ahụ aka ịgbake ngwa ngwa ọbụna mgbe ọ rụsiri ọrụ ike na ntụrụndụ ahụ. N'ihi ya, i nwere ike ịrụsi ọrụ ike ma hụ ihe ga-esi na ọrụ gị pụta.
Mbelata n'anụ ahụ
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị nwere ike iche na ha na-eme ihe zuru oke, ọ bụghị iri nri dị ukwuu ma ghara ịhapụ ahụ abụba ha chọrọ ịla n'iyi, testosterone Enanthate kwadoro ime ya n'ụzọ dị irè. Ihe dị ịtụnanya bụ na ọ bụrụ na ị bụ onye na-arụ ọrụ, ị gaghị efu ahụ ike gị kama ọ bụ abụba na-ejighị ihe ọ bụla nke na-ezobe ha.
Ihe nke a pụtara bụ na ị ga-ejigide akwara gị, ọbụnadị ka mma ka ha kọwaa. Enweghị abụba abụba ga-eme ka ị nọgide na-adị ndụ ma bie ogologo ndụ.
Nnukwu ahụ ike
Ọ bụrụ na ị na-ewu ụlọ, ị ga-aghọta eziokwu na testosterone enanthate arụ ọrụ ahụ bụ zuru okè. Ọ na-enyere mmadụ aka site na ịba ụba nke ọbara ọbara n'ime ụmị ọkpụkpụ. Testosterone enanthate na-egbochi mmetụta cortisol, hormone nke na-arụ ọrụ site na ịbaghasị ahụ ike nke a na-eduga ná nkwụsị ya.
Iji bulie nnukwu ibu, ị ga-enweta ike ọzọ. Otu n'ime ihe kpatara ọtụtụ ndị na-akpụ akpụ ga-eme ihe ọ bụla iji mepụta ike ha bụ n'ihi na ọ na-ejikọta ya na uru dị ukwuu na oke ahụ. Testosterone enanthate bụ otu n'ime steroid kachasị mma nke ga-enyere gị aka ịmekwuwanye ike nke na-enyere gị aka ibuli arọ ị na-achọsi ike maka ya.
Otu esi eme Testosterone Enanthate homebrew nzọụkwụ site nzọụkwụ
Ime onwe gị homebrew Testosterone Enanthate nwere ike ma ọ dị mfe ma ọ bụ mgbagwoju anya, ụzọ ị họọrọ ya ịbụ. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ịkụda gị n'ọtụtụ sayensị na ya, ma anyị ga-eweta ya karịa. A bụ ihe ndị a chọrọ na nzọụkwụ site nzọụkwụ nduzi na otu ị nwere ike ime biya Testosterone Enanthate;
Testosterone Enanthate ntụ ntụ: 62.5 grams
Testosterone Enanthate: 250mg kwa ml
Benzyl mmanya (BA): 5ml (2%)
Mkpụrụ vaịn: 148.13ml
Tenia iri nke ọ bụla nwere 10 ml (Nhazi zuru ezu kwesịrị ịnwe okpu, ihe nkedo na roba, na vial.)
20mL / 60 ml serringe nke nwere ihe nrịta ntanetị 18-21.
Sringe 3mL nwere oghere ntinye 18-21
Mkpanaka Glass na 100mL Beaker
Testosterone Enanthate homebrew nzọụkwụ site nzọụkwụ
Nzọụkwụ 1: Weigh testosterone enanthate ntụ ntụ.
Nzọụkwụ 2: Tinye ntụ ntụ, BA, na BB n'ime beaker
Nzọụkwụ 3: Kpoo beaker ahụ na mmiri ịsa ahụ
Nzọụkwụ 4: Tinye mmanụ grapeseed
Nzọụkwụ 5: Nzacha
Nzọụkwụ 6: Gbanyụọ ha ka ha gbanye mgbapụ
Nke a bụ nkọwa zuru ezu banyere otú e kwesịrị isi mee ya;
Nzọụkwụ 1: Weigh testosterone enanthate ntụ ntụ
Tụlee ya Testosterone Enanthate ntụ ntụ iji hụ na ị na-eji ihe dị oke mkpa ị chọrọ iji mee ka ebe obibi gị. Iji nweta oke kwesiri, nweta obere akwụkwọ ma debe ya na ọnụ ọgụgụ.
Iji jide n'aka na ị gaghị agụnye ihe dị arọ nke akwụkwọ ahụ mgbe ị na-atụ uzuzu, pịa ya ka ịtọọ ọnụ ọgụgụ na efu. Ị nwere ike ịgbakwunye ntụ ntụ nwayọọ nwayọọ iji zere ịtụnye ihe dị ukwuu nke na ị ga-achọ ka ị wepụ.
Mgbe ụfọdụ, ntụ ntụ nwere ike ịdị ntakịrị nke na ị ga-achọ ịnọgide na-edegharị ya oge ọ bụla ịchọrọ ịgbakwunye ụfọdụ. Ụzọ kachasị mma ị ga-esi gbanye ya bụ site n'ịgbakwunye obere ntụ ma pịa na ọnụ ọgụgụ iji mkpịsị aka gị mee ka ọnụ ọgụgụ ahụ daa. Ozugbo ị kwenyesiri ike na i jirila 25 grams kwụzie ya, ị dị mma ugbu a. Gwa Testosterone Enanthate ntụ ntụ iji jide n'aka na ị na-eji ezigbo ihe ị chọrọ iji mee ka ụlọ gị
Mee ka ntụ ntụ dị na beaker.
Tinye 2ml nke Benzyl mmanya na 2ml Benzyl Benzoate.
Ọrụ bụ isi nke ịgbakwunye Benzyl mmanya na-aba n'anya bụ ịrụ ọrụ dị ka onye na-agwọ ọrịa. Ọ na-arụkwa ọrụ nke ọma dịka ihe nkwụsị nke na-edebe mmanụ na ọkwá niile n'otu ebe. Benzyl Mmanya na - ejikwa ya eme ihe, ma uru nke na - abịakwute ya bụ na ọ na - enye aka n'inwe njide na - enweghị mmerụ.
Nzọụkwụ a bụ nhọrọ, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka usoro ahụ na-agba ọsọ, mgbe ahụ, ị ​​gaghị agba ya. Were ite ma jupụta ihe dị ka sentimita asatọ nke mmiri. Tinye ya na isi iyi nke okpomọkụ, dịka, stovu ma kpochaa ya.
Were pan ma tinye beaker n'ime ya. Mee ka pan ahụ banye na centimeters mmiri. Na-ele anya na ntụ ma na-ekiri ka ọ na-agbaze ruo mgbe ọ na-eru nso ikpochapụ. Ihe ngwọta doro anya pụtara na agbajiri ngwakọta ugbu a.
Ihe a nile na - eme ka nzepu ntụzu kpam kpam n'ime ihe mgbaze. Gaa na nzo ozo mgbe enweghi uzuzu.
Chere maka concoction iji mee ka obi dị jụụ ma tinye mmanụ ahụ dị n'ime ya. Ị nwere ike kpoo ya ntakịrị iji mee ka nzacha dị mfe.
Mkpụrụ mmanụ mkpụrụ vaịn bụ nne nke mmanụ ndị ọzọ niile na-arụ ọrụ. Ihe na-eme ka ọ dị mma maka iji ya karịa ndị ọzọ bụ na ọ na-adị mfe karị ma nwee ihe ndị nwere anesthetic. Ozokwa, ọ na-enyere aka rụzie anụ ahụ mebiri emebi ma gbakwunye ya niile ọ dị mma maka gị! Ọ ga-abụ na ị ga-ata ahụhụ site na ihe nfụkasị nke mkpụrụ mmanụ mkpụrụ vaịn kpatara.
Nzọụkwụ ọzọ ị ga-amalite bụ iji dozie ihe ngwọta n'ime sirinji nke ị ga-eji nyocha ya. Ị nwere ike iji otu nnukwu sirinji ma ọ bụ obere ma họrọ ịmegharị usoro ugboro ugboro.
Wepu ntanetị syringe 0.22um site na ngwugwu ya ma dezie agịga akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na obere akụkụ ma tinye aka na sirinji ahụ. N'iji mmanya na-aba n'anya, hichapụ ihe mkpuchi ahụ na-adịghị ọcha ma tinye mkpịsị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ya. Tinye ebe a na-etinye aka na nnu sirinji n'ime vial ahụ.
Nzọụkwụ a bụ nzọụkwụ dị oké mkpa, ndị niile gwakwara steroid ga-agafe ya. Ọ dị njọ na a ga-egbochi nza ahụ n'oge usoro nhazi. N'ihi ya, ị ga-achọpụta na usoro ahụ na-adị ngwa ngwa. Iji gbochie nke a, dochie nyo na ihe ọhụrụ iji zọpụta gị ihe mgbu nke inwe ịnọgide na-echere.
Otú ọ dị, ọ dị mkpa ka ị rịba ama na oge eji dozie ngwọta dabeere na steroid nakwa mg / ml nke ngwaahịa ahụ.
Ozugbo e mechara nyochaa na vial na-adịghị ọcha, usoro ahụ zuru oke.
Jide ihe ngwọta gị site na iji mgbapụ gbanye.
Malite gị steroids homebrew si Testosterone
testosterone akpọnwụ ụlọ bụ ihe kachasị mma ị nwere ike ịmalite na ọ bụ na ahụ gị maara ya. A na-emepụta ya na ahụ ma na-enyere ya aka ito eto, rụzie ma mepee.
Mgbe ụbụrụ testosterone dị obere, enwere ọganihu na abụba na ibu. Testosterone supplementation bụ ụzọ kacha mma i nwere ike isi mezuo egwuregwu, inwekwu ntachi obi, na ike ike. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịgbanwe ahụ gị, mgbe ahụ, ị ​​ga-atụle na -eme ka steroid gị na-eji Testosterone.
Ihe iseokwu nke na-abịa na ime ka steroid gị bụrụ ebe obibi gị bụ na ị nwere ike ghara ịtụkwasị obi na ọ ga-enye gị nsonaazụ ndị ị kwesịrị. Ọbụna mgbe ị gbasoro uzommezi ziri ezi, ị ga-achọpụta na ị nweghị obi ike nke ihe ị mepụtara. Ọtụtụ ndị na-emepụta steroid ha na-eji ya dịka usoro ikpe na ụzọ nhie.
Ọ bụrụ na ịnweghị nkà ịme ihe nyocha zuru ezu, mgbe ahụ, ị ​​gaghị etinye aka na usoro a n'ihi na ọ nwere ike bụrụ ihe ize ndụ nye gị. Dị ka a hụrụ na isiokwu ị chọrọ naanị ụlọ ọrụ akụrụngwa ma na-efu obere nzọụkwụ nwere ike ịkwụsị ịnye gị nsogbu dị iche iche site na usoro nkedo. Nke ahụ bụ n'ihi na nkwadebe maka steroid kwesịrị ịba ezigbo ahụ tupu ịgbanye ya. Ọ pụtara na ị ghaghị ịkpachara anya n'oge nkwadebe. Ịghara inwe anya nke ọma nwere ike ime ka ị merụọ ahụ onwe gị mgbe ị na-agbalị ịmepụta ihe ị nwere ike ịzụta njikere.
Iji kwenyesie ike na ị na-eme ihe ziri ezi na Testosterone Enanthate dosage na àgwà, ị kwesịrị ịtụle itinye aka n'ime ụrọ steroid. Ọ gaghị abụ naanị nchekwa maka gị kama ọ ga - adịkwa mfe iji ya.
Ịmepụta steroid gị nke ọma bụ uru n'ihi na ọ na-enye aka n'inweta ezigbo uru gị na mgbatị ahụ n'emeghị ka i nwee igwu miri emi n'ime akpa gị. O nwekwara ike inye ihe ọzọ ka mma maka steroid ndị dị ala nke ndị na-ere ahịa na-eweta na ahịa. Na ihe kachasị mma Testosterone homebrew na-enye n'elu, ị nwere ike ịmepụta ngwaahịa dị elu.
Anabolic Steroids na Ime ha, Prọfesọ Frank, peeji nke 1-42
Testosterone: Action-Defficiency-Substitution, Eberhard Njeschlag, Hermann M. Behre, peeji nke 330-339
Otu esi choputa ndi nwere uzo uzo di na 12 Steps Otu esi eji Trenbololone Ntụziaka na-ejikọ Trenbolone Enanthate Powder 2019